Barnaamijka ABLE ee Gobolka Washington wuxuu ka caawiyaa shaqsiyaadka naafada ah keydinta mustaqbalka - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Barnaamijka ABLE ee Gobolka Washington wuxuu ka caawiyaa shaqsiyaadka naafada ah keydinta mustaqbalka
Barnaamijka ABLE ee Gobolka Washington wuxuu ka caawiyaa shaqsiyaadka naafada ah keydinta mustaqbalka
Markii Koongarasku meelmariyey oo Madaxweyne Obama uu saxeexay Stephen Beck Jr. ABLE (Kasbashada Khibrad Nolol Wanaagsan) 2014, dadka naafada ah ee u qalma ayaa ugu dambayntii badbaadin kara baahiyadooda maalinlaha ah, maalgashi ku samayn kara koontada bilaa cashuurta, waxayna u diyaar garoobi kartaa mustaqbalka iyadoon luminta manfacyada gobolka ama federaalka.
Bishii la soo dhaafay, ka dib sannado badan oo shaqo adag oo lala yeeshay u doodayaasha iyo daneeyayaasha gobolka oo dhan, Ganacsiga ayaa martigaliyay dabaaldega barnaamijka cusub ee Gobolka Washington ee keydinta ABLE. Dadka khudbadaha ka hadlaya iyo martida la sharfay waxaa ka mid ahaa wakiilka biilka ee Christine Kilduff, Khasnajiga Gobolka Washington Duane Davidson, Gudoomiyaha ABLE Jeff Manson iyo u doodaha dhalinyarada Emma Patterson iyo hooyadeed, Amy Patterson.
ABLE waa qorshe keyd canshuur ka faa'iideysi ah oo u oggolaanaya shakhsiyaadka naafada ah iyo qoysaskooda inay u keydsadaan kharashaadka la xiriira naafonimada iyagoon u qalmin faa'iidooyinka muhiimka ah ee gobolka iyo federaalka, sida Medicaid iyo Dakhliga Kabitaanka Dheeraadka ah (SSI). Xilligan, shakhsiyaadka ayaa u qalmin waxtarradaas marka hantidoodu gaarto $ 2,000, ama $ 3,000 lamaanayaasha. Taasi mar dambe ma ahaan doonto kiiska markii lacagaha lagu shubo koontada ABLE.
Adoo adeegsanaya qorshe ABLE, shakhsiyaadka ku tiirsan faa'iidooyinkan ayaan mar dambe lagu qasbin saboolnimo sidaa darteed waxay sii wadi karaan u qalmitaanka iyaga, sida uu sheegayo Peter Tassoni, oo ah maamule gobol ee barnaamijka Washington State ABLE.
Iyada oo loo marayo ABLE, dadku waxay lacag u dhigan karaan keyd muddo dheer ah, iyada oo loo marayo dhowr ikhtiyaar oo maalgashi, ama kharash ah, iyada oo loo marayo ikhtiyaar aamin ah. Dakhliyad kasta oo ku jirta akoonka 'ABLE' waa bilaa cashuur haddii loo isticmaalo kharashyada u qalma, sida waxbarashada, guriyeynta, tikniyoolajiyadda caawimaadda, adeegyada taageerada shakhsiyeed iyo kharashyada kale ee la xiriira naafada Shakhsiyaadka leh naafonimo weyn kahor da'da 26 waxay xaq u leeyihiin xisaab. U-qalmitaanku wuxuu ku saleysan yahay qeexitaanka Maamulka Sooshiyaal Sikiyuurran ee naafanimada, oo ay ku jiraan naafonimo jireed, maskaxeed ama koritaan.
Dadka degan gobolka Washington ee isqorista barnaamijka ABLE waxay xaq u leeyihiin inay ka dhaafaan khidmadda dayactirka koontada sanadlaha ah $ 35 illaa Juun 30, 2019. Intaa waxaa dheer, qof kastaa wuxuu gacan ka geysan karaa koontada ABLE illaa laga reebo kaarka canshuurta hadiyadaha sanadlaha ah oo ah $ 15,000.
Qiyaastii 50,000 oo dadka Washington ee naafada ah iyo qoysaskooda ayaa ka faa'iideysan kara ilaha cusub, taageerada, iyo adeegyada si ay u gaaraan himilooyinkooda maaliyadeed.
Waxaan kugu boorinaynaa inaad waxbadan barato oo aad la wadaagto macluumaadka ku saabsan qalabkan qiimaha badan ee gacan ka geysan doona xoojinta bulshada iyadoo laga caawinayo dhammaan reer Washington inay gaaraan himilooyinkooda. Booqo annaga Bogga ganacsiga iyo www.washingtonstateABLE.com.
Xoojinta bulshadaWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
← UPDATE: Dagaallada Ganacsiga iyo canshuuraha Xarunta Shirarka Isugeynta waxay keeneysaa $ 93 milyan oo Horumarineed Bulshada ah, oo ay kujirto $ 30 milyan oo loogu talagalay Guriyeyn Laqaban Karo →